Toyota Land Cruiser 2012 (#581813) ကို Yankin မြို့နယ်တွင... | CarsDB
Lot Number: #581813
LAND CRUISER 2017 FACE JAPAN
ZX Grade. 4600CC. ၀ယ်သူအမည်ပေါက် ၇မည်။ FULLY GRADE.
Price: 2100 thein (၀င်ငွေခွန်မပါ)
CarsDB တွင် ( ဦး/ဒေါ် ) Ko Yan မှ ကြော်ငြာတင်ထားသော Toyota Land Cruiser 2012 နှင့်ပတ်သက်၍ စုံစမ်းလိုသည်ဟု ပြောပါရန်။